Ogeysiisyo sharci ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Websaydhka 'www.wkg-ch.org' ee Kaniisadda Adduunka ee Dunida (WKG Switzerland) waa macluumaad guud oo keliya mana sheeganayso inay sax yihiin oo dhammaystiran yihiin. Shaki la'aanta dhexdhexaadka ayaa tilmaamaya meelaynta soo socota. Xaaladaha qaaska ah ee gaarka ah, codsashada qodobbada sharciga ee khuseeya, sharciga kiiska iyo ku-celinta ayaa loo hayaa.
WKG Switzerland waxay qaadataa dhammaan tilaabooyinka macquulka ah si ay u hubiso kalsoonida macluumaadka la soo bandhigay, laakiin ma samayso wax ballanqaad ah oo ku saabsan saxnaanta, isku halleynta ama dhameystirka macluumaadka ku jira websaydhka. Sheegashada masuuliyada ka dhanka ah sheyga ama waxyeelada aan rasmiga aheyn eey sababtay adeegsiga ama adeegsiga macluumaadka la bixiyay ama adeegsiga macluumaadka khaldan oo aan dhameystirneyn ayaa gabi ahaanba laga saaray.
Afeef si aad uhesho xiriirada iyo tixraacyada
Websaydhkan waxaa ku jira xiriiriyeyaal (Tixraacyo) boggag kale. WKG Switzerland wax saameyn ah kuma lahan naqshadooda ama waxa ku jira sidaa darteedna mas'uul kama ahan. Gaar ahaan, mas'uuliyad kasta oo ka mid ah waxyaabaha la soo bandhigay si cad ayaa loo diiday, ha noqoto inay tahay sharci darro, akhlaaq xumo ama xitaa xitaa da'da aan ku habboonayn. Qofka booqda websaydhkaas, oo ku xidhan websaydhka WKG Switzerland, ayaa leh mas'uuliyadda buuxda ee booqashadiisa.
Iyada oo saldhig u ah dukumentiyada websaydhkeena, waxaan si ula kac ah u dooranay qaab PDF ah (Qaabka Dukumiintiga Dukumiintiga Adobe Adobe) waa mid xaddidan. Si aad u furi karto dukumiintiyadan, waxaad u baahan tahay Adobe Reader. Waad sameyn kartaa taas "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » kala soo bax bilaash.
Ogeysiiska xuquuqda daabacaadda
Nuxurka iyo qaab dhismeedka qodobbada iyo sawirrada lagu daabacay degelkan waxaa ilaaliya xuquuqda daabacaadda. Isticmaal kasta oo aan oggolynin sharciga xuquuqul insaanka wuxuu u baahan yahay oggolaanshaha hore ee qoraalka ah ee WKG Switzerland. Daabacaadaha iyo soo dejisashada websaydhada waxaa loo samayn karaa oo keliya adeegsi ahaaneed, gaar ahaaneed iyo mid aan ganacsi ahayn.
Saxnimada sharciga ah ee sheegashadaan
Been-abuurkaani waa in loo qaddariyo inuu qayb ka yahay daabacaadda internetka ee laga soo diray. Haddii qaybaha ama qaab shaqsiyadeed ee qoraalkan ay tahay inaanu sii jiri doonin, ama uusan u dhigmin ama uusan si buuxda u dhigmin xaaladda sharciga ee lagu dabaqi karo, qaybaha haray ee dukumiintiga ayaa ah kuwo aan wax saameyn ah ku yeelan doonin waxa ku jira iyo ansaxnimadooda.
WKG Switzerland waxay xaq u leedahay inay isbedel ku sameyso degelkan wakhti kasta ogeysiis la'aan.